IMac Pro Space Gray Fitaovana amidy amidy raha mbola tahiry | Avy amin'ny mac aho
Manuel Alonso | 15/05/2021 17:00 | About us
Fotoana fohy talohan'ny nanapahan-kevitr'i Apple ihany koa ny fanesorana ireo kojakoja volondavenona miaraka amin'ny iMac Pro tadidy ao amin'ny lisitry ny varotra. Nanapa-kevitra ny orinasa fa tonga ny fotoana tokony hanjavonan'ny iMac volondavenona amidy mba hanomezana modely vaovao. Izao ny kojakoja anao azo vidiana misaraka ihany koa voaisa ny androny.
Raha tianao ny loko volondavenona habakabaka dia tokony manararaotra ianao, satria nanapa-kevitra i Apple fa tonga ny fotoana ho an'ny kojakoja ao amin'io loko io ary miaraka amin'ny iMac Pro, dia mijoroa toy ny solosaina ihany. Ity fomba ity dia tsy afaka mahazo afa-tsy iray amin'ireo ireo kojakoja ireo raha maharitra ny tahiry. Araka ny hitantsika ao amin'ny pejy fivarotana totozy, fitendry na trackpad Amin'ireo loko ireo dia ampitandremana isika fa amin'izao fotoana izao dia manana singa hamidy isika, saingy rehefa tapitra ny tahiry, dia amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo na faharoa.
Dingana ilaina izany, manaraka ny fanafoanana ny solo-sainanao iMac Pro .. Rehefa lany ireo loko ireo, amin'ny safidy volafotsy ihany izy ireo no ho hita.
Apple dia mamela toerana ho an'ny modely vaovao tsy maintsy tonga hisolo ireo maodely taloha izy ireo. Ny iMac Pro dia iray tamin'ireo niharam-boina voalohany ary ankehitriny ny kojakoja mitovy loko no mizaka ny anjarany. Tsy maintsy manome lalana ny ho avy isika, amin'ilay iMac vaovao miaraka amin'ny M1 izay efa ananantsika maodely eny an-tsena sy amin'ny loko sy kojakoja samihafa hifanandrinana. Fomba tena Apple, manana ny zavatra rehetra hifanaraka sy mitovy loko. Zavatra izay tsy isalasalana fa ho hevitra tsara ho an'ny iMac Pro ho avy.
Amin'izao fotoana izao raha tianao na tianao ny accessories amin'ny loko volondavenona, aza misalasala ary mahazo azy ireo izao, alohan'ny hahalany ritra azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Amidy amidy IMac Pro Space Gray Grey raha maharitra ny entana
Hack AirTags, omeo MacBook Air sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho